ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကိုပေါနှင့် ဓါတ်ပုံပညာ”
ဟား ဟား.. ပထမဆုံးပုံကိုကြည့်လိုက်တာ သောက်နေတဲ့ကော်ဖီတောင် သီးသွားတယ် ။ ခွိ ။
သင်တန်းသား အမှတ်စဉ်( ၂ ) .....
ထိပ်တန်းအဆင့်ဝင် ကင်မရာမင်းတံသို့သင်တန်းတက်လိုသဖြင့် သင်တန်းခ မည်မျှ ကုန်ကျမည်ကို မဝံမရဲ မေးသွားသည်
Snap and Dark Shot !
ဓာတ်ပုံတွေ အရမ်း မိုက်တယ်. :D
ဒုတိယပုံအရောက် မပြုံးပဲဝါးလုံးကွဲ ..:-)))
ဟီးဟီး ကိုပေါကြီး လွှတ်ရီရလို.ကျေးဇူး!!
ရေလည် လန်းတယ်ဗျာ ပုံတွေက။ အဟိ။ ကျွန်တော်လဲ အဲဂလို စမ်းတဝါးပုံတွေ အများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ရပါကြောင်း။
တနင်္လာနေ့ မနက် ဒီပို့စ်ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးကြီးပါပေတယ် ..
သင်တန်းတက်ရန် အတွက် ဒီတပါတ် ပိတ်ရက် အဟောင်းတန်းမှာ ကင်မရာ သွားရှာလိုက်ပါဦးမယ် ..
ဒီဓါတ်ပုံတွေက ကိုပေါရိုက်တာမှမဟုတ်တာ ကိုပေါကို တခြားသူတွေက ရိုက်ပေးတဲ့ပုံဆိုတော့ ကိုပေါညံ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ အမျိုးသားထက်တော့ သာသေးတယ်။ ကျွန်မအမျိုးသားရိုက်ရင် ခေါင်းမပေါ်တဲ့ ပံပဲများတယ်။ ပြီးတော့ လူက ရုပ်ဆိုးရတဲ့အထဲ သူလက်မငြိမ်လို့ ထွက်လာတဲ့ပုံတွေဟာ အမြဲတမ်း သရဲသဘက်လိုပဲ ပေါ်နေလို့ အမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ရတယ်။။ ဒါကြောင့် ကျွန်မပုံကောင်းကောင်း မရှိဘူး။ သူတို့သားအဖပုံတွေဆို ကျွန်မရိုက်ထားပေးတာ အကောင်းတွေချည်းပဲ များတယ်။
ဆြာပေါ၏ ဓါတ်ပုံပညာများကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အရမ်းရီချင်တာ ရုံးမှာမို့ ရီချင်တိုင်ရီမရ အော်ဒုက္ခ
ဒါ ပညာရှိ ဆန်တယ်။ ဒီလောက်ပဲ ကြည့်ထားအုန်း ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ :)
ဒုတိယပုံနဲ့ တတိယပုံကိုတော့ ခိုက်သွားပြီ။ :D
ကိုပေါ..နောက်ထပ် ဒါမျိုးလေးတွေ လုပ်ပါဦး...။
ဒုတိယပုံအောက်ကစာဖတ်အပြီး လာမန့်နေတာ ၊ ဆက်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်..။
ရယ်လိုက်ရတာ ထမင်းတွေတောင် သီးတယ်၊ စိတ်ညစ်နေချိန် ကိုပေါရဲ့ ဒီပို့စ က ရယ်စရာ ဟာသမြောက်လို့ ကျေးဇူး
thanksalot ko paw,
very sleepy in office,
then my eye become wide when i read ur post.
ကိုပေါရေ... ဝေးနေတာကြာတဲ့ ဘလော့ကမ္ဘာထဲပြန်အ၀င် ဒီပို့ စ်လေးဖတ်ရတာ အတော်ကို စိတ်လန်းဆန်းသွားတယ်… ကင်မရာကလဲ မျက်နှာလိုက်ပါ့နော်… မဒမ်ပေါပုံလေးတွေသာ ကွက်ကွက်ပေါ်နေတာ အထူးအဆန်းပဲ… ဒါကြောင့်လဲ ခုနောက်ပိုင်း နောက်ဆုံးပေါ်ကင်မရာလေးက မဒမ်ပေါနဲ့ ပဲ တတွဲတွဲဖြစ်နေတာ ထင်တယ်… မဒမ်ပေါဓာတ်ပုံပညာကို ဟိုတနေ့ က အိမ်ကပန်းလေးတွေ ရိုက်ပေးသွားကတည်းက လေးစားသွားတာ… ကိုပေါဓာတ်ပုံပညာကိုတော့ ခုမှပဲ သိရတော့တယ်… ဆက်ကြိုးစားပါ… အားမငယ်ပါနဲ့ လေ…
Hi..Love your posts. Cheers..:)
အန်ကယ်ပေါရဲ့ ဓတ်ပုံကြည့်ပြီး လာဘ်ခန်းထဲမှာတခွိခွိရယ်မိလို့ ဆရာကခပ်လန့်လန့်နဲ့လှမ်းကြည့်တယ်ဗျ...ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခုနမှသူကဆူထားတာ အခုထ,ရယ်နေတော့ကြောင်သွားပြီ လို့ထင်နေလားမသိဘူး...အားလုံးကိုပြုံးပျော်စေတဲ့...ဦးလေးပေါ..
တော်သေး ရုံးမှာ မဖတ်မိလို့။
မထူးပါဘူးလေ။ နောက်နေ့ ရုံးရောက်လဲ အလုပ်လုပ်ရင်း ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်နေဦးမှာပါ။
သင်တန်းကြေး ဘယ်လောက်လဲဟင် ...
ကိုပေါရဲ့ ဓါတ်ပုံပညာကို ကြိုက်လွန်းလို့ ၃ခါ လာကြည့်ပါတယ်.. အားရပါးရ ရယ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ..။
haha ROFl =)) Ko Paw,
LOL^^ when i read this "မိတ်ဆွေခမြာမှာလည်း ဘယ်ဘ၀မှ ၀ဋ်ကြွေးမှန်းမသိ။ ပလက်ဖောင်းနှင့် မျက်နှာနှင့် ထိလုခမန်း လမ်းမပေါ်တွင် ၀ပ်တွားလျက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရိုက်ပေးရှာ၏။ ဓါတ်ပုံရိုက်နေစဉ် ကားတက်ကြိတ်မသွားသည်မှာ ကံကောင်းလှချေသည်။"
Ma Lay said...
စောစောစီးစီး ရုံးမသွားခင် ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်မိတာ ကံကောင်းလိုက်တာ...
အဲဒီအခါကျရင် တကယ် အဲဒီလို ခပ်မှောင်မှောင် အရိပ်ကျကျ ပုံလေးတွေ ရိုက်တတ်အောင် သင်ပေးရမှာနော်.... ဒါပဲ
I cant stop but laughing. Thanks much for the post.
i have to close my mounth n laugh in the office.very good post.still waiting for the new.your post really make me wake up.
ကိုပေါပို့စ် လာဖတ်တာ တော်တော် စိတ်ရွှင်သွားလေရဲ့.
စာရင်းလာသွင်းလိုက်ပြီ.... အဲလို ဓါတ်ပုံတပုံတည်းမှာ အလင်း အမှောင်ပါအောင် သေချာရိုက်နိုင်တာ နည်းတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူး။ လေးစားဘာဒယ်။။။။။။။
သင်တန်းလာတက်တာ တော်ပါသေးရဲ့ လာသလောက်ပဲ လက်ခံလို့ အကိုရေ လှပါတယ် နောက်ခံတွေနဲ့ မဒမ်ပေါကို ပြောပါတယ် အဟီးးးး
သူများတွေသိမ်ငယ်စိတ်ဝင်မှာကို အားနားပြီး gentle man ပီပီကြောင်လက်သည်းဝှက်ထားခဲ့တဲ့ကိုပေါရေ..အခုတော့ ရင့်ကျက်လာကြပါပြီ လို့ အားနာပါးနာတွေးပေးတဲ့အတွက်...အားမနာတော့ဘူးနော်။အဟိ
မဒမ်ပေါက အသားဖြူလို့ ပေါ်တာနေမှာ။
ကိုပေါ ရှိရာ အရပ်သို့ အလေးပြုသွားကြောင်းပါ။
ကိုပေါ ဓာတ်ပုံပညာကို အဝေးက ကြည်ညိုနေသူတဦး
စာကိုဖတ်ရင်းနဲ့ ရီချင်စိတ် လှိုက်တက်လာတယ်။ ကျွန်တော့ အဖြစ်တွေနဲ့ တော်တော်တူလွန်းလို့။ lab ထဲမှာ မအောင့်နိုင်ဘူး စပ်ဖြီးဖြီးကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် စားပွဲက ကုလားကတော့ တစ်ယောက်တည်း ရီနေတာ ရူးများနေလား ထင်တော့မယ်။ ကျွန်တော်လည်း သင်တန်းတက်မယ်ဗျာ။ အခြေခံက ဆရာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ သင်ရင် မြန်မြန်တတ်လွယ်မှာဗျ။ ဟီး
ပုံတွေကြည့်ပြီး ရီလိုက်ရတာ..း-)
အမလေး တော်လိုက်တာ ကိုကိုတော် အဟတ်ဟတ် ရယ်ရတာကိုမောလို့ :D
သတိရလို့ မှတ်ချက်ရေးသွားတယ်ဗျာ။ စာအချို့ ပြန်ရေးဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။
ဆီပုံးမထားတဲ့လူ ဆိုတော့လည်း ဧည့်ခန်းမရှိလို့ မီးဖိုချောင်ထဲ တန်းဝင်လာရသလိုပေါ့။ မဒမ်ပေါ ဘာတွေချက်လဲ။
ငါလိုးမသား ငပေါ ။ စောက်ရူး ..........။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်နေတဲ့ကောင်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာပြည်ရဲ. ကယ်တင်ရှင်လို.ထင်နေပုံပဲ။
Anonymous ! How come so rude? Who is ur parent?